Arsenal oo laga soo diiday dalabkii labaad oo ay ka gudbisay Weeraryahan ka tirsan kooxda Lorient – Gool FM
(London) 16 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa in laga soo diiday dalabkii labaad oo ay ka gudbisay Weeraryahanka naadiga Lorient ee Alexis Claude-Maurice.
21-sano jirkaan ayaa dhaliyey 14 gool, waxaana u caawiyey afar gool oo kale 16 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Ligue 2 xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Maadaama kaliya loo qorsheeyey Arsenal inay saxiixyo cusub ku sameyso xagaagan 40 milyan oo gini ayaa macallin Unai Emery waxaa la warinayaa inuu u dhaqaaqay horraantii bishaan soo xero gelinta Claude-Maurice.
Lorient ayaa soo diiday dalab 6.1 milyan oo gini ahaa, shabakadda Get French Football News ayaana warinaysa in Arsenal ay hadda ku guuldarreysatay dalabkeedii labaad.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Gunners ay sare u qaaday dalabkii hore oo ay gaarsiisay 14 milyan oo gini.
Kaddib markii ay markale garaacday albaabka Lorient, waxaana loo soo jeediyey kooxda ka dhisan Waqooyiga London inaysan weli diyaar u ahayn inay iibsato Claude-Maurice, taasoo ka dhigan Gunners ay ku guuldarreysatay dalabkeedii labaad.